Kuwa kale Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Kuwa kale Warshad
Kolajkayaga warshadaha ee ka kooban 18-ka nooc ee amino acids, qiimaha nafaqada sare, shaqo xoog leh, kolajka waa walax firfircoon oo jir ahaaneed. Hydroxyproline iyo hydroxylysine waxay gaar ku yihiin amino acids-ka collagen.
Gelken Gelatin waa cunto saafi ah oo tayo sare leh oo cunno borotiin ah oo ay soo saaraan alaabo ceyriin oo tayo sare leh iyo tas-hiilaadka warshadaha ee ugu horumarsan. Gelatin wuxuu ka yimaadaa doofaarka, hilibka lo'da ama kalluunka. Xulashada taxaddar ee alaabta ceeriin waa aasaaska wax soo saarka gelatin si loo hubiyo nabadgelyada wax soo saarka iyo tayada.
Gelatin sameeyayaashu waxay u isticmaalaan oo keliya doofaarro caafimaad leh, lo 'iyo kalluun sida walxo ahaan.
Marka lagu daro qoyaanka iyo dambaska, waxa ku jira borotiinka Gelatin in ka badan 85% .Waxay si gaar ah ugu habboon tahay badeecooyinka qaarkood oo leh milix yar, sonkor yar iyo meelaynta borotiinka oo sarreeya. Ka sokow bixinta borotiinka badeecada, waxay kaloo bixin kartaa qaab-dhismeed gaar ah oo loogu talagalay wax soo saarka.
Kaabsal adag oo madhan wuxuu ka samaysan yahay gelatin dawooyinka fasalka la cuni karo ka dib marka si fiican loo farsameeyo iyo qalabka kaabayaasha ah ee lagu hayo budada adag, walxaha ukunta u eg - qolof godan. Qolofta 'Capsule shell' waxay leedahay bioavailability wanaagsan waxayna u milmi kartaa si dhakhso leh, si kalsooni leh oo aamin ah.
Koolajka fasalka ku quudin waxaa laga sameeyaa maqaarka xoolaha iyo lafaha la xushay oo ah shey ceyriin ah, waxaana lagu soo saaraa si waafaqsan si waafaqsan tiknoolajiyada ka baaraandegista cuntada iyo deegaanka. Waxaa lagu sifeeyay iyada oo loo marayo hydrolysis enzymatic, sifeynta, nadiifinta heerkulka sare, qalajinta buufinta iyo habab kale.
Lafta xabagta xabagta waa mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn loo isticmaalo isku xidhka xayawaanka. Astaamaheeda waa: waxqabadka isku xidhka wanaagsan, xoog sare, qoyaan yari, qalajinta dhakhsaha, dhammaystirka isku xidhka wanaagsan, iyo qiimaha hooseeya, fududahay in la isticmaalo, gaar ahaan ku habboon isku xidhka iyo dhajinta qolofka adag ee daabacan, waxay heli kartaa natiijooyin wanaagsan.